ဤကဏ္ဍတွင် ရှားပါးလှသောပေစာပုရပိုက်စာများ၊ ကျမ်းစာများ၊ သမိုင်းရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများကိုစုံလင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးရှာဖွေတင်ပြထားပါသည်။ ရှမ်းစာပေသမိုင်းရာဇ၀င်များကို လေ့လာလိုက်စားသူတို့အတွက် လေ့ လာနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၀င်ကြည့်သူအပေါင်း နှစ်သက်ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ shanyoma site အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော A3 Scanner ကြီးကို၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောငွေကြေးကို လှူ ဒါန်းပေးကြကုန်သော ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သူ မိုင်းရှူးစော်ဘွားကြီး၏မြေးတော်စပ်သူ စိုင်းဆိုင်မိန်း-နန်းငင်းစန္ဒာမြတ်(သမီး)-နန်းသျှရီခမ်းမိုင်း၊ နန်းခမ်းဆီလိုင်း မိသားစုမှ ကျပ်နှစ်သိန်းနှင့်ဒေါ်နီနီ (ငွေငါး မိသားစု)သီပေါမြို့မှ ကျပ်တစ်သိန်းတို့ကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသည်။ ထိုလှူဒါန်းမှုများအတွက် ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါ၏။ A3 Scanner မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ငါး​သိန်းကျော်ခန့်ကုန်ကျပါ၏။
၁၈၃၉-မှ-၁၉၂၉ ခုနှစ်အထိ ရှမ်းပြည်နယ်သမိုင်းဖြစ်စဉ် မိုင်းကိုင်ပုရပိုက်စာ
ရှမ်းဘာသာ ရှမ်းစာမူဟောင်းဖြင့်ရေးသားထားသော ရှမ်းပြည်နယ်သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို မိုင်းကိုင် ပုရပိုက်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည်ကို ပြန်၍စကင်ဖတ်ထားသော စာဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းဘောင် ခေတ်နှောင်းအချိန်မှစ၍ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနယ်များအတွင်း ပြည်တွင်းစစ်ကို ခုနှစ်အလိုက် ရေးထားသည်၊ ထို့ပြင် တောင်ပိုင်းရှမ်းနယ်များကို စော်ဘွားနတ်ရွာစံသည် ရှမ်းစော်ဘွား အရာ ဆက်ခံသည့် နှစ်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ရှမ်းသမိုင်းကို လေ့လာ နေသူသုတေသီများ အတွက် အလွန်တန်ဖိုးများသော စာဖြစ်ပါသည်။ ဤစာပုရပိုက်ကို www.myanmarbook.com မှရယူပြီး ပြန်လည်လွှင့်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၁.၅၀) မီဂါဗိုက်။ (1.50)MB pdf file application. အုန်းပေါင်မြို့သမိုင်း - ဦးကာလိန္ဒ(ရှမ်းစာသင်ဆရာကြီး)
၁၅-၃-၁၉၆၆-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းဘာသာဖြင့် မိုင်းကိုင်စက္ကူပေါ်တွင် ရေးသားပြီးစီးသော အုန်းပေါင် သီပေါမြို့သမိုင်းစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းလင်္ကာရှည် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သီပေါမြို့သမိုင်း ကြောင်းကို သိလိုသူများအတွက် အလွန်တန်ဖိုးများသော စာဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းမူဟောင်းစာဖတ် တတ်သူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာကို www.myanmarbook.com မှရယူပြီး ပြန် လည် လွှင့်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၆.၅)မီဂါဗိုက်။ (66.5)MB pdf file application. ကာမသျှတ္တရကျမ်း(ရှမ်း-မြန်မာ-ပါဠိ)
ဤကျမ်းစာပုရပိုက်ကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၇ ခုနှစ်တွင် ရေးသားပြီးစီးပါသည်။ ရှမ်း-မြန်မာ-ပါဠိ သုံးဘာသာ​နှင့်ရေးသားထားပြီး ကျမ်းစာ၏နောက်ပိုင်း၌ ဆေးကျမ်းကို ထပ်မံထည့်သွင်းရေးသား ထားပါသည်။ လေ့လာလိုသူ သုတေသီများအတွက် အကျိုးများပေလိမ့်မည်။ ဤကျမ်းစာကို www.myanmarbook.com မှ ရရှိပြီး ပြန်လည်လွှင့်တင်ပေးထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၁)မီ ဂါဗိုက်။ (11.0)MB pdf file application. သီပေါမြို့သမိုင်း - စာရေး(အမည်မသိ)
ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၇.၄)မီဂါဗိုက်။ (57.4)MB pdf file application. ရှမ်းသက္ကရာဇ်စဉ်တွက်နည်း - ဆရာစောတ
ရှမ်းစာမူဟောင်းနှင့်ရေးသားပြုစုထားသော ရှမ်းပုရပိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၀၄-ခုနှစ်​တွင် ရေးသားပြုစု ပြီးစီးပါသည်။ ဤရှမ်းစာပုရပိုက်ကို www.myanmarbook.com/index.asp မှရရှိပြီး ပြန်လည် လွှင့်တင်ပေးထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၇.၁၁) မီဂါဗိုက်။ (7.11)MB pdf file application. မေမြို့ သို့မဟုတ် ပြင်ဦးလွင် - စိုင်းအေးမောင်
ရှမ်းလိုရေးသားထားသော မေမြို့ သို့မဟုတ် ပြင်ဦးလွင်မြို့၏သမိုင်းကြောင်းဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁-ခုနှစ်၌ ထုတ်​ဝေသော ဆိုင်ပဲင်းမဂ္ဂဇင်းတွင် လာရှိသောသမိုင်းဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ ဝေမျှပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၅၈)ကီလိုဗိုက်။ (358)KB pdf file application. ရှမ်းသမိုင်း(ပင်းတိုင်းဟိုတီး) - ရှမ်းပညာရေးကော်မတီ
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ရှမ်းတို့ဆင်းသက်လာပုံ၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ပုံ၊ ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု တို့အကြောင်း၊ ရှမ်းမင်းဆက်အကြောင်းတို့ကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်ရေးသားထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်း၀င်ဓာတ်ပုံပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ပါ၀င်သည်၊ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၂.၉)မီဂါဗိုက်။ (12.9)MB pdf file application. ဆေခန်ဖရှမ်းမင်းဧကရာဇ် - ခင်းဆိုင်
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက မောရှမ်းအင်ပါယာကြီးကို တည်ထောင် ခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ စိတ်၀င်စားဖွယ်ကောင်းသော သမိုင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၀၃)မီဂါဗိုက်။ (3.03)MB pdf file application. ကျားဖြူရှင်သမိုင်း - မိုင်းခမ်းခေးစန်
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ကျားဖြူသခင်၏လူဘ၀တစ်၀က် ကျားဘ၀တစ်၀က်ဖြင့် နေထိုင် ကျက်စားပုံ၊ မျက်မမြင်ရှမ်းမင်းသမီးတစ်ပါးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၍ သားတော်(၃)ပါး ဖွားမြင်ကာ ထိုသားတော်(၃)ပါးမှ မိုးညှင်းမြို့၊ မိုးကောင်း၊ မိုးမိတ်မြို့များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း ကြောင်းနှင့် ယခုတိုင်အောင်ပင် မိုးညှင်းမြို့တွင် ကျားဖြူစေတီတော်တည်ရှိနေပုံ အကြောင်းတို့ ကို စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုရ မည့်ရှမ်းသမိုင်းစာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၇၃၁)ကီလိုဗိုက်။ (731)KB pdf file application. နန်ချောင်-တာလီ ဘယ်သူ့ရဲ့အာဏာစက်အောက်မှာလဲ - မဟာမှုန့်
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော၂၀၀၈-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ဆိုင်ပဲင်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာ ရှိသော တစ်ချိန်တုန်းက ယူနန်နယ် တွင်းရှိ နန်ချောင်-တာလီနယ်သည် မည်သူ့၏အာဏာစက် အောက်တွင် ရှိခဲ့သည်ကို ပြန်လည်ဆန်း စစ်တင်ပြထားသော သမိုင်းဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ် ပါသည်။ အရွယ်အစား(၄၃၇)ကီလိုဗိုက်။ (437)KB pdf file application. ရှမ်းသမိုင်း(သင်သည် သူတို့နှင့်တူပါ့မလား သူတို့သည် သင်နှင့်တူပါ့မလား) - ဆွမ်ဆမ်ကောက်(ဘာသာပြန်သည်)
၂၀၀၀-ခုနှစ်ထုတ် ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သမိုင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ရှမ်းဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသော ဘာသာပြန်ရှမ်းသမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်း အင်ပါယာကြီးကို မည်သို့ထူထောင်ခဲ့ပုံ၊ ရှမ်းမင်းဆက် အစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံ၊ ရှမ်းလူမျိုး များ မည်သို့မည်ပုံဆင်းသက်လာခဲ့ပုံများ စေ့ငုစုံလင်စွာ ရေးသားထားသော ရှမ်းသမိုင်းစာအုပ် ကောင်း တစ်အုပ်ဖြစ်ပါ​ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ရှမ်းအကြောင်းကို ကျကျနန သိလိုသူများ အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၇၇၄) ကီလိုဗိုက်။ (774)KB pdf file application. ရှမ်းစာပေသမိုင်း - ဦးကံခမ်းစံဆမ်
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ရှမ်းစာပေစာလုံးများ မည်သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို ပြုစုထား သောသမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၂-ခုနှစ် မေလတွင် ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်မှ တာ၀န်ယူထုတ်ဝေ ထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၅၆)မီဂါဗိုက်၊ (2.56)MB Pdf file. အတိတ်ကာလတစ်ခါတုန်းက ရှမ်းသမိုင်း - နန်ချောင်မျိုးနွယ်
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော အတိတ်တုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရှမ်းတို့၏သမိုင်းဇာတ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာလိုသူများအတွက် လိုအပ်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ် ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၁.၃၁)မီဂါဗိုက်။ (1.31)MB pdf file. ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်းမှ ရှမ်းမျိုးနွယ် - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၇-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၂၈ မှ ၃၅)ထိလာရှိသော ရှမ်းလူမျိုးအကြောင်းသမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၆၄၄)ကီလိုဗိုက်။ (644)KB pdf file. ဆေခန်ဖမင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၉-ခုနှစ် မတ်လထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၉ မှ ၅၆)ထိ လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ် ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၄)ကီလိုဗိုက်။ (244)KB pdf file. မြင်းငါးကောင် ရှမ်းစာပေသင်ကြားရေးဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၀)ကီလိုဗိုက်။ (240)KB pdf file. ရှမ်းဟူသောအမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကြောင်း - မဟာမှုန့်
၁၉၉၇-ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းမှထုတ်ဝေသော ရှမ်းမဂ္ဂဇင်း ၌ လာရှိသော ရှမ်းဟုခေါ်ဝေါ်ရခြင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသော သမိုင်း ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်၊ ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၂၂၄)ကီလိုဗိုက်။ (224)KB pdf file. စံကား-ယွန်းရှမ်းသမိုင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၁၀-ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၅)ကီလိုဗိုက်။ (245)KB pdf file. ရှမ်းတို့သိသင့်သော အခြားသူတို့ရေးသားထားသောသမိုင်း - ဦးစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၀-ပြည့်နှစ်ထုတ် ရှမ်းပြည်နယ်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၄၅၆)ကီလိုဗိုက်။ (456)KB pdf file. အတုယူစရာနှင့်ရှောင်ရန် - မောက်မောဝ်လုံ
၂၀၀၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၃၄)ကီလိုဗိုက်။ (234)KB pdf file. ရှမ်းဖတ်စာအုပ်အမှတ်စဉ်(၁) - ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ချုပ်
ရှမ်းနှစ် ၂၀၉၅-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းစာဖတ်တတ်ရန်နှင့်ဗဟုသုတအကြောင်းများတိုးပွားရန် ရည်ရွယ် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၈၂)ကီလိုဗိုက်။ (582)KB pdf file. ကွယ်လုနီးပါး ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသော ရန်ကုန်မြို့ ကိုးမိုင်ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် တိုင်းပြည်နှင့်ရှေးသမိုင်း၊ တကောင်းရှမ်းမြို့ တော်၊ မောမြို့တော်ကြီး၊ နန်ချောင်တိုင်းပြည်ကြီး၊ ဆင်းသက်လာသောရှမ်းနန်းတော်များ၊ သိကောင်း စရာအိန္ဒိယ သမိုင်းစာမျက်နှာ၊ အာရှလွှမ်းမိုး ဟိန္ဒူမျိုး၊ ဒွါရ၀တီ-လန့်နား၊ မွန်တို့ဌာ​နီ၊ ရခိုင်ပြည်၊ သိသင့်စရာ နယ်မြေအဖြာဖြာတို့ဟူ၍ အခန်းလိုက်ခွဲပြီး ရေးသားထားသော ရှမ်းဘာသာစာအုပ်ဖြစ်ပါ သည်။ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွဖေါ်ပြထားသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၄၇)မီဂါဗိုက်။ (4.47)MB pdf file. ကုလဝံသ - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌ပါသော အမျိုးအနွယ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁.၆၈)မီဂါဗိုက်။ (1.68)MB pdf file. နှစ်တစ်ရာကျော်က စာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - လုံးအူမန်
၂၀၀၅-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ် အစား(၁.၃၁)မီဂါဗိုက်။ (1.31)MB pdf file. ကမ္ဘာအနှံ့က ရှမ်းမျိုးနွယ် - မဟာမှုန့်
၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ရှမ်းလူမျိုးစုအနွယ် ကို စာရင်းနှင့်တကွဖေါ်ပြထားသော ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသောသမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၃၈)ကီလိုဗိုက်။ (138)KB pdf file. မိုင်းနောင်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း - ဦးဝိစိတ္တသာရ(ကျောက်မဲ)မှတင်ပြသည်
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသော ရှမ်းပိဋကတ်ဘာသာပြန်အသင်းကြီး၏ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာ တော်ဖြစ်တော်မူသော မိုင်းနောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ထေရုပ္ပတ္တိသမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၅၅.၁)ကီလိုဗိုက်။ (55.1)KB pdf file. လုံးတန်းကေး၏ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ရှမ်းစာပေသမိုင်းဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် - လုံးတန်းကေး
၁၉၄၀-ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ကြီးစိုးခဲ့စဉ်ကတည်းက ရှမ်းစာပေကို ခေတ်မီသော နည်းစနစ်ဖြင့် သင်ကြားရေးနှင့်ရှမ်းစာပေအသစ်သို့​ပြောင်းလဲနိုင်ရေးတို့အတွက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံတို့ကို သမိုင်းဖြစ်စဉ်အလိုက် ရေးသားပြုစုထားသော ရှမ်းစာပေ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်၊ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၁.၅၉)မီဂါဗိုက်၊ (1.59)MB pdf file. ရွှေတောင်-ကျားဖြူ
ရှမ်းလင်္ကာဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသော သမိုင်းဝတ္ထုဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၀၅-ခုနှစ်တွင် ရေးကူးပြီးစီးသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၁၄.၃)မီဂါဗိုက်။ (14.3)MB pdf file. Twilight Over Burma; My life asaShan Princess - ခွန်ယွန်းချိုမှ ရှမ်းဘာသာပြန်သည်
၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်၊ ဤစာအုပ်သည် အုန်းပေါင်သီပေါမြို့၏နောက်ဆုံးစော်ဘွား ဖြစ်သော စဝ်ကြာဆိုင်၏မဟာဒေဝီဖြစ်သူ Inge Sargent က တက္ကသိုလ်တွင် အတူပညာသင်ကြားရင်းနဲ့ ဖူးစာစုံကာ မြန်မာပြည်သို့ လိုက်လာခဲ့ရပုံ၊ သီပေါမြို့သို့မဟာဒေဝီအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရပုံ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ​စဝ်ကြာဆိုင်အဖမ်းခံရ ပုံ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းစုံလင်ကို ရေးသားဖွင့်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ခွန်ယွန်းချိုမှ ပြန် လည်ပြီး ရှမ်းဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၅၀)မီဂါဗိုက်။ (3.50)MB pdf file. ရှမ်းကဗျာလင်္ကာ - လုံးတန်းကေး
၂၀၀၅-ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့ ဝုန်း၀မ်းပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသည်၊ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၀၂)မီဂါဗိုက်။ (3.02)MB pdf file. ရှမ်းတောင်တန်းသို့မှာတမ်းသီချင်းများ - တေးရေး ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်
ဇင်းမယ်အနုပညာအသင်းမှ စီစဉ်ထုတ်ဝေသော ရှမ်းတေးရေးဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်၏ရှမ်းသီချင်းများကို ၁၉၉၉-ခုနှစ်၌ စုစည်းထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၄၈)မီဂါဗိုက်။ (2.48)MB pdf file. မျက်မှောက်သိပ္ပံနည်းဖြင့် ယနေ့သျှမ်းစာကို လေ့လာနည်း
၁၉၆၈-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ဘ၀သစ်ပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၂.၅၂)မီဂါဗိုက်။ (2.52)MB pdf file. ဇာတိဿရဉာဏ်ဗေဒင်ကျမ်း - စဝ်ကာန်းဆေ (ခေါ်) ဆရာလှိုင်းဆိုင်
ရှမ်းစာပေသမိုင်းလောကတွင် စာဆိုပညာရှိကြီး(၉)ဦးရှိသည့်အနက် တစ်ဦးအပါ၀င်ဖြစ်သော စဝ်ကာန်းဆေ ရေး သားပြုစုထားသော ရှမ်းဘာသာဗေဒင်ပညာကျမ်း ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်ရှားပါးလှ​သောစာမူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းစာကို ၁၂၈၉-ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ကူးယူပြီးစီးခဲ့သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၁.၉)မီဂါဗိုက်။ (51.9)MB pdf file. ရှမ်းဖတ်စာအုပ်(စာလုံးရှည်) - မိုင်းမောဝ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့အသင်း
ယူနန်ပြည်နယ် မိုင်းမောဝ်ပြည်တွင် အသုံးပြုသော ရှမ်းဖတ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရှမ်းစာနှင့် ယှဉ်တွဲလျက် ဖတ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ရှမ်းစာလုံးအရှည်ကို ဖတ်တတ်ချင်ပါက ဤစာအုပ်ကို လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ရှမ်းစာပေလေ့လာလိုက်စားသူတို့အတွက် အင်မတန်ကောင်းမွန်သော ရှမ်းဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ် ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅.၁၅)မီဂါဗိုက်။ (5.15)MB pdf file. Tai Phake Primer - ရှမ်းသင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ(အာသံ)
အိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိ အာသံရှမ်းတို့၏သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် Chowkidingee Dibrugarh ၌ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၇၂)မီဂါဗိုက်။ (2.72)MB pdf file. Lords of the Sunset - Maurice Collis ခွန်ယွန်းချိုမှ ရှမ်းဘာသာပြန်သည်
ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၀၈-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ၌ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ မူရင်းစာအုပ်ကို စာရေးဆရာ ကြီး Maurice Collis မှရေးသားပြီး ယခုအခါတွင် ခွန်ယွန်းချိုမှ ပြန်လည်ပြီး ရှမ်းလူမျိုးများ အလွယ်တကူဖတ် ရှုနိုင်ပါစေဟု ရည်သန်ချက်ဖြင့် ရှမ်းဘာသာသို့ ပြန်လည်ဘာသာပြန်ပြီး ရေးသားထုတ်ဝေထားပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၁၆.၁)မီဂါဗိုက်။ (16.1)MB pdf file. ယွန်းစာသင်ပုန်းကြီး
၁၉၆၂-ခုနှစ်တွင် ရေးသားပြုစုပြီးစီးသည်။ မူရင်းယွန်းအက္ခရာပုံစံ စကားပြေအရေးအသားဖြစ်သည်။ ဤစာကို ၁၉၆၀-နှစ်အထိ အသုံးပြုလျက်ရှိသေးသည်။ ဤယွန်းအက္ခရာမှ ဂုံစာပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ စာအရွယ် အစား(၂.၃၃)မီဂါဗိုက်။ (2.33)MB pdf file. မျိုးချစ်သူ စဝ်ကဏ်းရွက် - ရှမ်းလူရည်ချွန်များမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ စီစဉ်သည်
၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ဖြန့်​ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅.၂၇)မီဂါဗိုက်။ (5.27)MB pdf file. အင်းကျမ်း
ရှမ်းမြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် မိုင်းကိုင်စက္ကူပေါ်တွင် ရေးသားပြုစုထားသော လောကီကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အင်းကွက်ရုပ်ပုံများဖြင့် ရေးဆွဲထားပြီး အကျိုးကျေးဇူးများကို ပူးတွဲဖေါ်ပြထားပါသည်။ လောကီပညာရပ်ကျမ်း စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၉၆)မီဂါဗိုက်။ (4.96)MB pdf file. ပုခက်လွှဲသောလက် - ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
၁၉၉၄-ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသည်၊ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၀၄)မီဂါဗိုက်။ (2.04)MB pdf file. ရှမ်းစာဆိုတော်(၉)ဦး - ဦးခွန်မဟာရေးသားပြုစုသည်
၁၉၈၆-ခုနှစ် ထုတ်ဝေသော ရှမ်းစာပေသမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော ရှမ်းစာဆိုတော်ကြီး (၉)ဦး၏အ ကြောင်းကို ပြုစုထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်စား(၁၃.၆)မီဂါဗိုက်။ (13.6)MB pdf file. ရှေးမူဟောင်းခမ်းတီလုန်ရှမ်းစာပေ စာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစာရိတ္တထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရှေးမူဟောင်းအတိုင်း ခမ်းတီလုန်စာပေယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီနှင့်ခမ်းတီလုန်ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်ပြုစုထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၅.၀၈)မီဂါဗိုက်။ (5.08)MB pdf file. ရှမ်းမြန်မာနှစ်ဘာသာ လေ့ကျင့်ရအောင် - ဆရာတော်ဦးဝါယမ(တန့်ယန်း)
ဤစာအုပ်တွင် နွယ်မြက်သစ်ပင်ပန်းမာလ်တို့၏အမည်ဝေါဟာရများကို ရှမ်း-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရှာဖွေပြုစု ထားပါသည်။ ဝေါဟာရပေါင်း(၂၀၀)ကျော်ပါ၀င်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၄)မီဂါဗိုက်။ (24)MB pdf file. ရှမ်းလင်္ကာကြီးရေးနည်းဖတ်နည်းနိဿရည်း - အရှင်နန္ဒိယ(ပင်လုံမြို့)
၂၀၀၃-ခုနှစ် ပင်လုံမြို့ မင်္ဂလာမွေတော်ကျောင်းတိုက်ပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၁၁.၁)မီဂါဗိုက်။ (11.1)MB pdf file. သိကောင်းစရာဗဟုဿုတများ အမှတ်စဉ်(၁) - စဝ်စံပုန်(ဝမ်စံမိုင်းမု)
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို မသိရပါ၊ ရှမ်းဘာသာစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၆.၅၆)မီဂါဗိုက်။ (656)MB pdf file. ရှမ်းစာဆိုတော်(၉)ဦးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ရှမ်းစာပေသမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော စာဆိုတော်ကြီး(၉)ဦး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၅၈)မီဂါဗိုက်။ (4.58)MB pdf file. ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို လိမ်သလဲ
၁၉၈၅-ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသော ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို လိမ်သလဲဟူသော ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆို ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ကွယ်အကြောင်းအရာများကို အမှန်အတိုင်းသိရမည့်ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထား သော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၉)မီဂါဗိုက်။ (19)MB pdf file. ရှမ်းအသံ - အမှတ်(၇)
၁-၁၁-၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ရှမ်းအသံစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၃၇) မီဂါဗိုက်။ (2.37) MB pdf file. ရှမ်းနှစ်သစ်ပေါ်ပေါက်လာပုံသမိုင်း - စိုင်းဖ
၂၀၁၀-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေထားသော ရှမ်းနှစ်သစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကြောင်းစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၂၆)မီဂါဗိုက်။ (3.26)MB pdf file. ရှမ်းမျိုးချစ်လက်စွဲစာအုပ်
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး စာအုပ်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၂.၄၂)မီဂါဗိုက်။ (2.42)MB pdf file. ခေတ်သစ်ရှမ်းပြည်သားများအတွက် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတော် - ခင်းဆိုင်
၁၉၉၀-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မောက်မယ်မြို့တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော်များကို ရှမ်းပြည်သားများ ရှမ်းဘာသာဖြင့် လွယ်လင့်တကူ လေ့လာနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၈.၂၄)မီဂါဗိုက်။ (8.24)MB pdf file. လွတ်လပ်တဲ့ရှမ်းပြည်သမိုင်း - စိုင်းရွက်ခေး(မိုင်းမောပြည်)
၁-၄-၁၉၈၉-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသောစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅.၁၇)မီဂါဗိုက်။ File size (5.17)MB pdf file. ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ညောင်ရွှေစော်ဘွား၏သားတော် စဝ်ဆေခန်ဖှ၏မိန့်ခွန်းစကား
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်နယ်၏ဂဇက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅.၄၈)မီဂါဗိုက်။ File size (5.48)MB pdf file. သိမှတ်စရာ ပဒေသာ ၁၉၈၆-ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ရှမ်းပြည်ပညာရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာတို့ကို စုစည်းထားသောစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၄၆.၃)မီဂါဗိုက်။ File size (46.3)MB pdf file. ကက္ကူစေတီတော်သမိုင်း - ခေးဆိုင်
၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထား ဘုရားစေတီသမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၃၁.၂)မီဂါဗိုက်။ File size (31.2)MB pdf file. ရှမ်းမျိုးနွယ်နှင့်ရာဇ၀င် - ခေးဆိုင်
၁၉၉၉-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားပြီး​စီးသော ရှမ်းသမိုင်းရာဇ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကြီးရှမ်းသမိုင်း ရေးဆရာမကြီးဒေါ်ခေးဆိုင်မှ ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား (၁.၁၄)မီဂါဗိုက်။ File size (1.14)MB pdf file. ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ - ထီးခမ်းရေးသားသည်
ရှမ်းသက္ကရာဇ် ၂၀၉၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်​ရေးသားသော ဒီမိုကရေစီသင်ခန်းစာစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅.၉၀)မီဂါဗိုက်။ File size (5.90)MB pdf file. ဘော်ကြိုဘုရားသမိုင်း(ရှမ်းဘာသာ) - ဖိလစ်ပိုင်မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးကျော်ဇော
ရှမ်းစာဟောင်းနဲ့ရေးသားထားသော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နှင့်ကျောက်မဲအကြားရှိ သမိုင်း၀င် ဘော်ကြိုဘုရားအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၇၉၅)ကီလိုဗိုက်။ File size (795)KB pdf file. ရှမ်းပညာရေး
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေသော ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးချက်စာတမ်းဖြစ်ပါ သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၆၆)ကီ လိုဗိုက်။ File size (566)KB pdf file. စစ်တွင်းကာလ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ
၂၀၀၆-ခုနှစ် ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၃၉)ကီလိုဗိုက်။ File size(339)KB pdf file. မိုင်းဆယ်စေတီ
၁၉၆၈-ခုနှစ်တွင် ရှမ်းစာမူဟောင်းဖြင့် ရေးသားပြီးစီးသော မိုင်းကိုင်စက္ကူစာလိပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယူနန်ရှမ်း တို့သည် ပထမဆုံးတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော မိုင်းဆယ်သင်းတွဲပြည်မှာရှိသော အမြင့် ၃၀၂ တောင်ရှိ စေတီ တော်၏သမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၈.၈)မီဂါဗိုက်။ File size (38.8)MB pdf file. ခေတ်သစ်ရှမ်းသီချင်း(၁)
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ရှမ်းသီချင်းများကို စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းမောဝ်ခမ်း စတဲ့တေးရေးဆရာ တေးဆိုဆရာများမှ သီဆိုထား​သော သီချင်းများကို စာအုပ်အဖြစ် ရေးသားထုတ်ဝေ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့ ကျောက်သွေးတန်းရှိ သုခဝတီပုံနှိပ်တိုက်မှ ရှမ်းနှစ် ၂၀၆၆-ခုနှစ် ဆယ့်နှစ်လပိုင်းတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၂၂)မီဂါဗိုက်။ File size (3.22)MB pdf file. ရှမ်းခေတ်ပေါ်သီချင်း(၂)
စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းမောဝ်ခမ်း အစရှိတဲ့ တေးရေးဆရာများမှ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ရှမ်း တေးသီချင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်၊ ဂီတနုတ်စ်များဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်။ ၁၉၇၀-ခုနှစ် ဇွန်လ မန္တလေးမြို့ သုခ၀တီပုံနှိပ်တိုက်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၄၅)မီဂါ ဗိုက်။ File size (2.45)MB pdf file. ရွက်ခုံးရှမ်းဘာသာဂျာနယ် ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၆)အဖြစ်ထုတ်ဝေထားသော ရှမ်းဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်အရွယ် အစား(၁.၇၂)မီဂါဗိုက်။ File size (1.72)MB pdf file. တိုင်းနေ(ခေါ်)မောရှမ်းစာအုပ်
၁၉၈၁-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၆၇)မီဂါဗိုက်။ File size (4.67)MB pdf file. အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် ပြည့်စုံရမည့်အင်္ဂါရပ်များတွင် စုံလင်စွာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၇၉)မီဂါဗိုက်။ File size (3.79)MB pdf file. မြီးကြည့်ပါ ချိုပါတယ် - ခ၀မ်ချို
၁၉၇၃-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဘ၀သစ်ပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင်​ရေးသားထား သော ဟင်းချက်နည်း စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၃၉)မီဂါဗိုက်။ File size (2.39)MB pdf file. အဘယ့်ကြောင့် sspp ပါတီမှခွဲထွက်ရသလဲ the-reason-of-splitting-from-sspp
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၉၃၅)ကီလိုဗိုက်။ File size (935)KB pdf file. ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှ လူမျိုးစုပြဿနာ SSUPC
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၉၃)မီဂါဗိုက်။ File size (2.93)MB pdf file. ယိုးဒယားပြည်တွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရှမ်းသံဃာ့အစည်းအဝေး ၂၁-၃-၁၉၈၁-ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃.၃၇)မီဂါ ဗိုက်။ File size (3.37)MB pdf file. polictics policy
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော နိုင်ငံရေးပေါ်လစီစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၅-၃-၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၇၄)မီဂါဗိုက်။ File size (2.74) MB pdf file. မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအ​ခြေခံဥပဒေ(ပထမ)မူကြမ်း-(ရှမ်းဘာသာဖြင့်)
၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉)ရက်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအတွက် ကော်ပိုရေးရှင်းပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ်သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂.၉၄)မီဂါ ဗိုက်။ File size (2.94)MB pdf file. ARM (automatic response mechanism)
အခြားတိုင်းပြည်သို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံသူအမျိုးသမီးများနှင့်အန္တရာယ်မှရှောင်တိမ်းသောအမျိုးသမီးများ မုဒိန်းကျင့်ခံရခြင်းမှ မည်သို့မည်ပုံခုခံကာ ကွယ်ရမည်ဆိုသည်ကို သင်ပြနည်းလမ်းပေးထားသော စာအုပ်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၉၂)ကီလိုဗိုက်။ File size (566)KB pdf file. မိုင်းလွယ် ရွှေကြက်တူစိမ်းဘုရားစေတီသမိုင်း ၁၃၆၆-ခုနှစ်တွင် သီပေါမြို့ တိုင်းကမ္ဘောဇပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်သည်၊ ရှမ်းစာဟောင်းဖြင့် ရေးသားထားသောသမိုင်း စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၀၆)ကီလို​ဗိုက်။ File size (406)KB pdf file. ရှမ်းပြည်တွင်းမှ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ - ခွန်ဆိုင်
ဤစာအုပ်သည် ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် မတ်လတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ၉မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ ရှမ်းရွာ ဇလပ်နီပုံနှိပ်တိုက် တွင် ရှမ်းဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ဆရာ၀န်ကြီးဒေါက်တာဦးစိုင်း ခွန်ယီ၊ ၀န်းသိုစော်ဘွားကြီးဦးအောင်မြတ်၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးစဝ်စံထွန်း၊စွယ်စုံပညာရှင်ဆရာ၀န်ကြီးဒေါက်တာ ဦးစိုင်းဘဉာဏ်(သီပေါ)၊ ရှမ်းစာပေပညာရှင်ဦးဝေါလခဲ့(ညောင်ရွှေ)၊ ရှမ်းစာပေပညာရှင်ခွန်ခမ်းခေါင်(မိုးညှင်း)တို့၏ အကြောင်းကို နှောင်းလူနောက်သား လူငယ်လူရွယ်များတို့အဖို့ လေးစားအတုယူ လိုက်နာလေ့လာကြရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်(၁)အဖြစ် ထုတ်ဝေသည်ဟုဆိုထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁.၅၃) မီဂါ ဗိုက်။ File size(1.53)MB pdf file application. Uploaded by 28.6.2012. ဟမ်းငိုင်းသမိုင်းရာဇ၀င်
ဤဟမ်းငိုင်းသမိုင်းရာဇ၀င်စာအုပ်တွင် ရှမ်းပြည်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကို နေ့စွဲခုနှစ်နှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ မည်သည့်စော်ဘွား မည်သည့်နယ်မှ ဘုရားစေတီ မည်သည့်နယ်တွင် စစ်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပွားခဲ့သည်များကို နေ့ခုနှစ်အချိန်နှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် သမိုင်းသုတေသီများအတွက် အကျိုးများမည့်စာအုပ်ကောင်းမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဟမ်းငိုင်းစေတီတော် သမိုင်းစာ၊ ဟမ်းငိုင်းဒေသတွင်းရှိ မြို့ဦးစေတီတော်သမိုင်း၊ ဇေတ၀န်ကျောင်း တော်သမိုင်းနှင့်ဘုရားဖူးသမိုင်းတို့ ကိုပါ ထည့်သွင်းမှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။ ဤရှမ်းသမိုင်းစာကို ချီးမြှင့်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၄၁၄)ကီလိုဗိုက်။ File size(414)KB pdf file application. Uploaded by 30.6.2012. ဆေခန်ဖ ရှမ်းဧကရာဇ်မင်း၏သမိုင်းချုပ် - လွန့်တိုင်း
လျန်းဖိုင်မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်(၃)၊ မှ ပြန်လည်ရယူထုတ်နုတ်စာစီရိုက်ထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၂.၉)ကီလိုဗိုက်။ File size (62.9)KB pdf file appliacation. Uploaded by 2.7.2012. chanting of wat phrathadonherng
ယွန်းစာနှင့်ရေးသားထားသော ဘုရားရှိခိုးစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ Published 26.4.1995, File size (2.63)MB pdf file application. Uploaded by 4.7.2012. ခုနစ်-နှစ်-တစ်နေ့ကျရင် - ခေးဆဲန်
၁၉၉၈-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ဤစာအုပ်သည် ရှမ်းဘာသာ ဖြင့်ရေးသားထားသော ပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ် လမ်းများကို ကွက်ကွက်ကွင်း ကွင်း ထင်ရှားရှင်းလင်းအောင် မကွယ်မဝှက် ဖေါ်ထုတ်ပြထားပေသည်။ ရှမ်းပြည် သူများမည်သို့ နစ်နာရ ခြင်းအကြောင်း၊ ဦးထွန်းအေး(နမ့်ခမ်း)နှင့်ဦးကျော်ဇော(သီ ပေါ)တို့နှစ်ဦးကြောင့် ရှမ်းစာပေများ နောက်ကျမှေးမှိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အ ကြောင်းစုံများကို ဖွင့်ချရေးသားထားပြီး အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက် သဘောထားများကွဲလွဲခဲ့ကြပုံများအကြောင်းကိုစုံစုံလင်လင် လေ့ လာ ဖတ်ရှုရမည့်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းလူမျိုးတိုင်း လေ့လာမှတ်သားသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၇၈၉)ကီလိုဗိုက်။ File size (789)KB pdf file application. Uploaded by 6.7.2012. Tai Dam Language
Printed by Crown Production, Ames, Iowa 50010, 1988. File size (412)KB pdf file application. Uploaded by 10.7.2012. ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း(Interview with U Sai Aung Tun)
ရှမ်းစာပေပညာရေးအကြောင်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ပျန်း ရှမ်းမဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် တွင် ပါ၀င်သည်ကို ပြန်လည်စာစီစာရိုက်ပြီး တင်ပေးထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၅၅)ကီလိုဗိုက်။ File size (555) KB pdf file application. Uploaded by 19.7.2012. မိုးကုတ် - ခွန်ယွန်းချို
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ၂၀၁၂-ခုနှစ် မေလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော မိုးကုတ်မြို့ဖြစ်ပေါ် လာပုံအကြောင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းများ ဆန်းစစ်တင်ပြထားသော သမိုင်းကြောင်းဆောင်းပါးကောင်းဖြစ်ပါ သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၇၀)ကီလိုဗိုက်။ File size (270)KB pdf file application. Uploaded by 19.7.2012. ရှမ်းအမျိုးသားနေ့(သို့)ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ (၆၅)နှစ်ပြည့်မြောက်အထိမ်းအမှတ်စာတမ်း(Shan National Day's 65th years)
ဤသမိုင်းစာတမ်းသည် ပင်လုံစာချုပ်ကို အကြောင်းပြု၍ ရှမ်းပြည်နယ်သည် မည်သို့မည်ပုံ လွတ်လပ်ရေးကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တွဲ၍ တောင်းဆိုခဲ့ရပုံ၊ စော်ဘွားများ၏သဘောထား၊ ရှမ်းပြည်လူထုများ၏သဘောထား၊ ရှမ်းလူထုကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစရှိသဖြင့် သမိုင်းကြောင်းစုံစုံလင်လင်ကို ရေးသားတင်ပြထားသော သမိုင်းစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသမိုင်းစာတမ်းကို ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ မေလ ထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို ပြန်လည်စာစီရိုက်ပြီး အများဖတ်ရှုနိုင်အောင် လွှင့်တင်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၆၂၀)ကီလိုဗိုက်။ File size (620)KB pdf file application. Uploaded by 20.7.2012. မောင်မယ်တို့အတွက် ရှမ်းပြဇာတ်သီချင်း အမှတ်(၁)
ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ရှမ်းပြဇာတ်သီချင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၉၀)မီဂါ ဗိုက်။ File size (2.90)MB pdf file application. Uploaded by 3.8.2012. Children Picture Dictionary of Adjectives in Tai
File size (419)KB pdf file application. Uploaded by 4.8.2012. 70 english-verbs to tai File size (401)KB pdf file application. Uploaded by 8.8.2012. tai-study-issue6-vol.1-2004
This book was written by Thai langugae. File size (922)KB pdf file application. Uploaded by 14.8.2012. tai-study-issue-5-vol.-1-2004
This book was written whit Thai Language. File size (1.60)MB pdf file application. Uploaded by 14.8.2012. tai-study-issue-5-vol.-5-2004
This book was written with Thai Language. File size (1.95)MB pdf file application. Uploaded by 14.8.2012. ခေတ်သစ်ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု Shan Modern Cultures ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ရှမ်းလူမျိုးများတို့၏ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁.၆၁)မီဂါဗိုက်။ File size (1.61)MB pdf file application. Uploaded by 16.8.2012. ရှမ်းကြီးစာပေ
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဆိုင်ပျဲန်းရှမ်းဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော ရှမ်းကြီးစာပေအကြောင်းကို ရေး သားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၂၂၄)ကီလိုဗိုက်။ File size (224)KB pdf file application. Uploaded by 26.8.2012. လေ့လာခဲ့ရသမျှ ရှမ်းစာပေသမိုင်း - မဟာမှုန့်
ရှမ်းစာပေသမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာပုံများကို ကျကျနန လေ့လာကာ ဆောင်းပါးအဖြစ် ရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဆိုင်ပျဲန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌ ပါသည်ကို ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၈၄)ကီလိုဗိုက်။ File size (484)KB pdf file application. Uploaded by 27.8.2012. လွမ်းမှန်းတတ မိုင်းမောဝ်၊ မိုင်းနေ နှင့် ဆစ်ဆောင်ပန်းနား - မောက်မိုဆိုင်
မိမိသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော ဒေသများအကြောင်းကို ပြန်လည်၍ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ ကို တင်ပြထားသော ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ဆိုင်ပျဲန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌ ပါသည်ကို ပြန်လည်စာစီရိုက်ထားပါသည်။
အရွယ်အစား(၃၀၉)ကီလိုဗိုက်။ File size (309)KB pdf file application. Uploaded by 27.8.2012. A study of women roles in the lanna folktales - Miss Piyaporn Konsin
This Paper was written with Thai language and for master of Art(Lanna Language and literature). File size (3.06)MB pdf file application. Uploaded by 9.9.2012. Migration For Education and Social Mobility : A Case Study of Keng Tung Monks Studying in Religion Universities of Chiang Mai Province - Mr. Anusorn Boonruang
This paper was written with Thai language and for Master of Arts(Regional Studies). File size (3.15)MB pdf file application. Uploaded by 9.9.2012. Religious Institution and Maintenance of Identity: A Case Study of Tai Khuen Temples in Kengtung, Shan State, Myanmar - Mr. Sarawut Roopin
Master of Arts (Regional Studies), A monastery is the symbol of the Buddhist religion which comprises monks and laity and exists as the core in the social structure of the Tai Khuen ethnic group. It serves the needs of
the religion and society. Changes in the religious institution and society occur within the sociopolitical and cultural context. From this study, it is found that the Buddhist sects in Kengtung have developed from the
original traditions of the Tai Sangha that comprises monks and laymen who were united by religious and social ideals. Temples play an important role as the spiritual centres for all people as well as the core religious institution. Social and cultural changes after annexation by Britain in 1885 affected the way groups of people were classified asaresult of “ethnological surveys” which led toapermanent cultural cleavage in Myanmar society. Ethnic identities materialize as cultural boundaries become visible. In the case of the Tai Khuen in Kengtung they intentionally built up their own identity from the ambiguous state of ethnic awareness to separate themselves from others. The analysis of the socio-cultural movement to maintain cultural identity in temples is made from the changes in temples and found that the most important temple in Kengtung has becomeaspace where Tai Khuen identity is maintained and the significance of monasteries, symbols and rituals are used as tools in the bargaining with the authorities and as response to the social and cultural domination by Myanmar society. The maintenance of Tai Khuen identity in monasteries is consequentlyaresult of pressure from religious and social institutions which is complicated in form. The process of
maintaining this identity changes continuously within the political, social and cultural context and conditions. “Historical events” are linked to createameaning andaTai Khuen identity for the present and will also continue into the future. File size (4.95)MB pdf file application. Uploaded by 19.9.2012. This paper was written with Thai Language. Hsipaw Chronicle In Tai Modern New Language
This book was written with modern tai language. File size (483)KB pdf file applicatin. Uploaded by 9.11.2012. Tai, Upper and Lower parts of Country - Khur Hsen (အထက်ပိုင်း အောက်ပိုင်းဒေသမှ ရှမ်း)
This script was sent by Author, herself, Khur Hsen, and appreciate for sending this to shanyoma. ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသော ဒီစာမူကို စာရေးဆရာကိုယ်တိုင် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပေးပို့သော ရှမ်းသမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင်ဒေါ်နန်းခေးဆဲန်ကို အထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၄၇)မီဂါဗိုက်။ File size (2.47)MB pdf file application. Uploaded by 17.11.2012. Grade4Shan History Text Book - Khur Hsen
This text book was published since 2005 and sent by Author Khur Hsen and appreciate for sending to shanyoma. File size (2.97)MB pdf file application. Uploaded by 20.11.2012. bookklet should be learned - Lon Sai Hpa
This is shan (or) tai book that should be read by many. File size (6.17)MB pdf file application. Uploaded by 22.11.2012. How to became Shan Opera (Old Tai Language)
File size (1.16)MB pdf file application. Uploaded by 22.11.2012. History; Tai Race and Shan States - Mong Kham Khur Seant
This book comprise Tai Races, literatures, Tai's Leaders and others histories. File size (754)KB pdf file application. Uploaded by 27.11.2012. This book was written with tai modern language. History of Shan Text Books - Sai Sin
Hsai Pen Tai Magazine, September, 2012. File size (1.15)MB pdf file application. Uploaded by 4.12.2012 Cause of Angry - U Hsen
Publised 2102 Tai Era, Aye Press, yangon. File size (2.94)MB pdf file application. Uploaded by 4.12.2012. Tai Culture (1) Luhtu Press, Hsipaw, 1-2.1975. Old Tai language Magazine. File size (7.44)MB pdf file application. Uploaded by 5.12.2012. Tai People Chronicle
File size (7.62)MB Pdf file application. Uploaded by 5.12.2012. Shan Reader Poem
File size (1.03)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.15, Janauary, 2008)
File size (2.19)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.16, March, 2008)
File size (2.95)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.17, July, 2008)
File size (2.92)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.23, December, 2009)
File size (1.73)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.24, April, 2010)
File size (1.69)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.26, October, 2010)
File size (2.26)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.27, Janauary, 2011)
File size (3.13)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.29, October, 2011)
File size (2.71)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.30, Janauary, 2012)
File size (2.34)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Hsai Pen Tai Magazine (No.25, July, 2010)
File size (2.58)MB pdf file application. Uploaded by 8.12.2012. Tai Tranditional Occult Pig Picture and Mantara (Old Scripture)
File size (2.89)MB pdf file application. Uploaded by 9.12.2012. Tai Educational Cartoon - Fai Leng
First Edition, Zalattni Press, Yangon, 2012.File size (2.72)MB pdf file application. Uploaded by 11.12.2012. Tai Quick Learning Book File size (2.14)MB pdf file application. Uploaded by 11.12.2012. Tai Learning Book Grade (1)
This book is Demonstrated with pictures. File size (11.8)MB pdf file application. Uploaded by 11.12.2012. Tai Folktales No.(2) - Sae Learnt Sao
2000, Ceylon Journey Press. File size (2.95)MB pdf file application. Uploaded by 14.12.2012. Tai Reader Text Book (2) Published by Tai Culture & Literature. File size (981)KB pdf file application. Uploaded by 14.12.2012. Shan Reader No.(3)
Published by Tai Culture & Literature, 2095 Tai Year, Zalattni Press, Yangon. File size (2.15)MB pdf file application. Uploaded by 16.12.2012. Khun Sam Law & Nang Oo Peim In Tai Version(Cartoon)
File size (4.62)MB pdf file application. Uploaded by 21.12.2012. History of Lai Kha in Tai language - Khur Sai(Lai Kha)
File size (416)KB pdf file application. Uploaded by 25.12.2012. Tai Learning text book basic level
File size (1.57)MB pdf file application. Uploaded by 26.12.2012. Rubaiyat of Omar Khayyam in Tai Version - Sai Kham Leik
Golden Lion Press, Yangon, 2000. File size (2.16)MB pdf file application. Uploaded by 30.12.2012. Tai Folktales No.1 - Sae Learng Sao
This book was written with Tai Language. File size (5.05)MB pdf file application. Uploaded by 30.12.2012. Tai Learning Book (1)
2010, Yangon. File size (2.46)MB pdf file application. Uploaded by 8.1.2013. Tai Learning Book (3)
1998, March, Zalattni Press, Yangon. File size (1.74)MB pdf file application. Uploaded by 8.1.2013. Who tricked to Pi Lai Sei (Tai Educational Cartoon)
File size (5.95)MB pdf file application. Uploaded by 8.1.2013. Our Villagers - Khao (Tai Cartoon)
File size(6.89)MB pdf file application. Uploaded by 12.1.2013. Shan States Journal of Shout for Justic 1948 No(5)
File size (8.53)MB pdf file application. Uploaded by 13.1.2013. Tai-Astrological-pictures-and-Occults
File size (11.5)MB pdf file application. Uploaded by 13.1.2013. monastic endowments in the sukhothai ayutthaya and thonburi-rattanakosin inscriptions - Sirisarn Mueanphothong
This papet was written with Thai Language. File size (1.82)MB pdf file application. Uploaded by 14.1.2013. Tai Vocabularies and various eassy - Nang Lao Sei Ying
File size (4.76)MB pdf file application. Uploaded by 15.1.2013. Tai-Wa Learning Text Book
File size (1.59)MB pdf file application. Uploaded by 23.1.2013. Pint Khur Tai (Part I)- Khur Hsen
Part (II) will be coming soon. File size (2.99)MB pdf file application. Uploaded by 29.1.2013. Biography of Sao Sra Long Pannavamsa(Mong Mao) in Tai Version.
Published by 2002, Zalattni Press, Yangon, Myanmar. File size (1.39)MB pdf file application. Uploaded by 8.2.2013. English Grammar and Exercises Book(1) Tai Version - Sao Khu Gandhamar(MA)
Aye Press, Yangon, Myanmar. File size(2.56)MB pdf file application. Uploaded by 19.2.2013. Grammar Of Shan-Myanmar-English And How To Translate - Sao Visuddha
2005, First Edition, Aye Press, Yangon, Myanmar. File size (4.52)MB pdf file application. Uploaded by 21.2.2013. Practical English with Tai Language - Jao Khu Pandita(Namkham)
2012, Published at Kuming, China. File size (3.02)MB pdf file application. Uploaded by 21.2.2013. Tai Curriculum Grade(1) File size (1.61)MB pdf fie application. Uploaded by 6.4.2013. Tai Curriculum Grade(2)
File size (2.01)MB pdf file application. Uploaded by 6.4.2013. Tai Curriculum Grade-3
File size (2.79)MB pdf file application. Uploaded by 20.4.2013. Tai Curriculum Grade-4
File size (4.59)MB pdf file application. Uploaded by 22.4.2013. The love ofaking(Tai Version) - Kham Moon
File size(12.6)MB pdf file application. Uploaded by 1.5.2013. Tai Peoples and Their Languages: A Preliminary Observation - Suriya Ratanakul
The Journal of Religion and Culture (Vol.1 No.1 2007) :189-232. File size (424)KB pdf file application. Uploaded by 5.5.2013. Tai Dam Origin Myth
File size(1.96)MB pdf file application. Uploaded by 5.5.2013. Tai dam alphabet book
File size(807)KB pdf file application. Uploaded by 5.5.2013. Ahom Raja Suhum's war against the Chutias: the texts. (compiled and arranged by François Jacquesson)
File size (212)KB pdf file application. Uploaded by 5.5.2013. «